November 24, 2019 - ThutaSone
မိုးချုပ်တဲ့ အထိ မအိပ်ဘဲ နေတဲ့သူများဟာ မြန်မြန် သေဆုံးနိုင်ကြောင်း ပညာရှင်များ ပြောဆို
November 24, 2019 ThutaSone 0
ဒီတစ်ခါတင်ဆက်ပေးချင်တဲ့ ဗဟုသုတရစရာ သတင်းလေးတစ်ပုဒ်ကတော့ အိပ်ရာဝင်နောက်ကျတတ်သူများအတွက် သတိပြုစရာသတင်းလေးတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပညာရှင်များရဲ့လေ့လာချက်စစ်တမ်းများမိုးချုပ်တဲ့ အထိ မအိပ်ဘဲ နေတဲ့သူများဟာ မြန်မြန် သေဆုံးနိုင်ကြောင်း သိရပါတယ်။ ဒီစစ်တမ်းတွေဟာ လူပေါင်း ၄၃၃,၆၂၈ ယောက်ကို တစ်ဦးချင်းစီ ခြောက်နှစ်ခွဲကျော်ကြာ လေ့လာဆန်းစစ်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက် သိရှိရတဲ့အချက်အလက်တွေအပေါ်အခြေခံထားတာဖြစ်ပြီး ထိုလူများထဲမှ ငါးသောင်းကျော်ဟာ အိပ်ယာဝင်နောက်ကျလေ့ရှိသူများဖြစ်ပြီးသူတို့တွေမှာ သေစေနိုင်လောက်တဲ့ ရောဂါလက္ခဏာ […]
ထမင်းစားရင်းဖြစ်စေ ထမင်းစားပြီးဖြစ်စေ ရေသောက်တဲ့ အကျင့်ရှိရင် ဒီပို့ကို ကျော်မသွားပဲ ဖတ်ကြည့်သွားပါနော်
ရေနွေးကြမ်းနှင့် နှလုံးခုန် ရုတ်တရက် ရပ်တန့်ခြင်း ဒီဆောင်းပါးလေး ဟာ အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ ကျန်းမာရေး နဲ့ပက်သက်တဲ့ဆောင်းပါးလေးပါ။ ထမင်းစားပြီးတိုင်း ရေနွေးသောက်ဖို့ သတိပေးတာ တစ်ခုတည်း မဟုတ်ပဲ နှလုံးခုန် ရုတ်တရက် ရပ်တန့် စေတဲ့ ရောဂါကိုလဲ သတိပေးရာ ရောက်ပါတယ်။ တရုတ်လူမျိုး နဲ့ ဂျပန်လူမျိုး တွေ […]
အသက် ၁၀၀ ရှိပေမဲ့ ရွာလယ်လမ်းမကြီးကို တစ်ယောက်တည်း ချုံမြက်ရှင်းပေးခဲ့တဲ့အဘွား
အသက် ၁၀၀ ရှိပေမဲ့ ရွာလယ်လမ်းမကြီးကို တစ်ယောက်တည်း ချုံမြက်ရှင်းပေးခဲ့တဲ့အဘွား စိတ်စေတနာကောင်းဆိုတာ အသက်ငယ်သည် ကြီးသည်မဟူ လူတိုင်းမှာ ထားနိုင်တဲ့ ရှိနိုင်တဲ့ လေးစားဖွယ်ချစ်ခင်ဖွယ် စိတ်လေးပါပဲ..ဒီလိုပဲ ပရဟိတအလုပ်ဆိုတာလည်း ငယ်သည် ကြီးသည်မဟူ လူတိုင်းမိမိတတ်နိုင်သလောက် လုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်ပါ…. အဲဒီလို အများအကျိုးအတွက် ငယ်သည်ကြီးသည်မဟူ လူတိုင်းလုပ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို သက်သေပြခဲ့တာကတော့ အသက် […]
စိတ်မကောင်းစရာသတင်းတစ်ခုကတော့ထပ်မံကြားရပြန်ပါပြီနေအိမ်မှာသေဆုံးလျက်တွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့ Kara အဖွဲ့ဝင်ဟောင်း Goo Hara
(၂၀၁၉) ခုနှစ်ကေတာ့ တောင်ကိုရီးယားရဲ့ကြယ်ပွင့်တွေတစ်ပွင့်ပြီးတစ်ပွင့်ကြွေလွင့်ရတဲ့ ကာလလို့ဆိုရမှာပါ။မကြာသေးခင်က ကိုရီးယားအနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Sulli ရဲ့သေဆုံးမှုဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးကိုလှုတ်လှုတ်ခတ်ခတ်ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်လည်း ဒီလိုမျိုးမဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်သတိထားမိစေခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း စိတ်မကောင်းစရာသတင်းတစ်ခုကတော့ထပ်မံကြားရပြန်ပါပြီ။တောင်ကိုရီးယားအဆိုတော်အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Kara အဖွဲ့ဝင်ဟောင်း Goo Hara ကို ဒီနေ့ညနေ(၆)နာရီခန့်က နေအိမ်မှာသေဆုံးလျက်တွေ့ရှိခဲ့တာပါ။ဂမ်နမ်းခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ကတော့ သေဆုံးသွားပြီဖြစ်ကြောင်းလည်းအတည်ပြုခဲ့ပါပြီ။ Goo Hara ဟာ သရုပ်ဆောင်၊အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အသက်(၂၈) နှစ်သာရှိသေးတာပါ။ငယ်ရွယ်လှပပြီး […]
အိပ်ယာဝင်နောက်ကျခြင်းကြောင့် ဖြစ်လာမယ့် ကျန်းမာရေးပြဿနာများ
အိပ်ယာဝင်နောက်ကျခြင်းကြောင့် ဖြစ်လာမယ့် ကျန်းမာရေးပြဿနာ (၆) ခု နောက်ကျမှ အိပ်ပြီး နောက်ကျမှ အိပ်ယာထခြင်းက ကျန်းမာရေးအတွက် မသင့်တော်ကြောင်း ကျန်းမာရေးပညာရှင်များ အကြံပြုပြီးဖစ်ပါတယ်။ နောက်ကျမှ အိပ်ယာဝင်ခြင်းက လူတစ်ဦးရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါ ထိခိုက်စေနိုင်တာကြောင့် တတ်နိုင်သမျှ အိပ်ချိန်ကို စောစောမှန်မှန် ဖြစ်အောင် ကြိုးစားသင့်ကြပါတယ်။ အိပ်ယာဝင်နောက်ကျခြင်းရဲ့ […]
တရုတ်နိုင်ငံ ဟီနန်ပြည်နယ်က ကမ္ဘာ့အမြင့်မားဆုံး ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်
တရုတ်နိုင်ငံ ဟီနန်ပြည်နယ်မှာ တည်ထားတဲ့ ရပ်တော်မူ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော် ကြီးက ကမ္ဘာပေါ်မှာ အမြင့်မားဆုံးဗုဒ္ဓရုပ် ပွားတော်ကြီးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဉာဏ် တော်အမြင့်က ပေ ၄၂၀ ရှိပြီး ဧရာမ ကြေး နီအတုံးပေါင်း ၁၁၀၀ နဲ့ တည်ထားတဲ့ ဗုဒ္ဓ ရုပ်ပွားတော်ကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ၆၅ ပေရှိတဲ့ […]
တစ်ချိန်က ကျောင်းဆရာမတဲ့ခုတော့ လမ်းပေါ်မှာ စွန့်ပစ်ခဲ့ထားရရှာသူ အဘွားရဲ့ ဝမ်းနည်းစရာအဖြစ်အပျက်
တစ်ချိန်က ကျောင်းဆရာမတဲ့ခုတော့ လမ်းပေါ်မှာ စွန့်ပစ်ခဲ့ထားရရှာသူ အဘွားရဲ့ ဝမ်းနည်းစရာအဖြစ်အပျက် အရမ်းကြေကွဲစရာအဖြစ်အပျက်လေးပါအရင်က တပည့်တွေကို စာသင်ပေးခဲ့ပြီး နိုင်ငံ့သားကောင်းတွေ မွေးထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ ဆရာမခုတော့ ကူသူမရှိ လမ်းပေါ်မှာ စိတ်ဖောက်ပြန်ပြီး လျှောက်သွားနေရတဲ့ အဖြစ်သို့ ရောက်နေရပါပြီ.ကြုံခဲ့ပြီး ကူညီခဲ့တဲ့ အစ်မတစ်ယောက်က ဒီအကြောင်းလေးကို ခုလိုပြောပြထားပါတယ် ပုံ့တို့တွေ ဂျင်းအကြီးကြီးမိခဲ့ကြတာပါငယ်ငယ်တုံးက မိဘတွေ […]
ရသမျှ ပိုက်ဆံကိုထမင်းမစားဘဲ မိတ်ကပ်ဖိုး အတွက် စုနေလို့ မကြာခင်သေရတော့မယ့် မိန်းခလေး
လူတွေအားလုံးဟာ ရူးသွပ်ကြတယ်လို့ ဆိုရင် ပရိတ်သတ်ကြီး လက်ခံနိုင်ပါ့မလား? လက်မခံနိုင်လောက်တဲ့ ဆိုရိုးစကားတစ်ခုပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း တကယ့်လက်တွေ့မှာတော့ တကယ်ကိုပဲ ရူးသွပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ လူတွေဟာ လိုချင်တာ၊ ဖြစ်ချင်တာ တစ်ခုခုအတွက် အသက်တောင်ပေးပြီး လုပ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါတွေကလည်း ရှေ့က ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေက သက်သေပါပဲ။ ဒီလိုပဲ တရုတ်နိုင်ငံမှာ ၂၆ နှစ်အရွယ် […]
“လူကြီး လူငယ်မရွေး မစားဖြစ်မှာစိုးလို့ ထပ်ခါထပ်ခါ သတိပေးနေတာပါ …. 👍 ဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေကို ဖတ်ဖြစ်အောင်သာဖတ်ကြည့်ပါဗျာ”
ငါးကြီးဆီဆိုတာ တူနာငါး၊ ဆာလမွန်ငါးတွေလိုမှာ Omega-3 အဆီအက်စစ်ကြွယ်ဝတဲ့ ငါးတွေရဲ့တစ်သျှူးထဲက ထုတ်ယူရရှိတဲ့အဆီတစ်မျိုးဖြစ်တယ်။ Omega-3 အဆီအက်စစ်က ခန္ဓာကိုယ်ရှိအရေးကြီးတဲ့အဂါင်္တွေရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ကို ချောမွေ့ပြီးမြောက်စေပါတယ်။ ငါးကြီးဆီသောက်ပေးရင် ဘယ်လိုကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်မလဲဆိုတာကို ဆက်လက်ဖော်ပြပေးပါမယ်။ ၁။ခန္ဓာကိုယ်အဆီတွေကို လောင်ကျွမ်းစေတယ်။ ငါးကြီးဆီစားပေးခြင်းဖြင့် အင်ဆူလင်လှုံ့ဆော်မှုကိုတိုးလာစေတာကြောင့် ကိုယ်တွင်းအဆီတွေကိုချေဖျက်ပေးနိုင်တယ်လို့ လေ့လာချက်အရတွေ့ရှိရပါတယ်။ ဒါကြောင့်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သူတွေကို ငါးကြီးဆီပုံမှန်စာသုံးပေးဖို့ တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ ၂။ ဦးနှောက်ကျန်းမာရေး။ […]
တို့ဆေး မိခဲ့သူတစ်ဦးပြောပြသော ဆေးအာနိသင်ပြေစေသည့် ဂါထာတော်
ယ​နေ့​ခေတ်​စား​နေ​သောတို့​ဆေး ကို အနိုင်​ယူ​လိုက်ေ​သာနည်း ကျ​နော်​ကိုယ်​တိုင်​ တ​နေ့ကကြုံခဲ့ရပါတယ်​။တ​​နေ့က ကျ​နော့်​အလုပ်​ခွင်​ကအပြန်​ လှိုင်​သာယာ ရုံး​ရှေ့မှတ်​တိုင်​မှYBS 99 စီးလို့အိမ်​ပြန်​ဖို့ ရုံး​ရှေ့မှတ်​တိုင်​​ရှေ့ကို ကျ​နော်​ ည​နေ၆နာရီခွဲခန့်​​ရောက်​ခဲ့ပါတယ်​။ အချိန်​က ည​နေ ၆နာရီခွဲဆို​ပေမဲ့ အ​တော်​​မှောင်​လာ​ပေမဲ့ EPC လမ်းမီးတိုင်​များကမလင်း​သေးပါဘူး။ ကျ​နော်​လည်းကျ​နော်​စီးမဲ့ကားလာမယ့်​ ဖက်​ကို​မျော်​ကြည့်​ယင်းရပ်​​စောင့်​​နေခဲ့ပါတယ်​။ အဲဒီအချိန်​မှာ ကျ​နော့​​နောက်​မှ လူတစ်​​ယောက်​လျှောက်​လာပြီး​နံ​ဘေး​ရောက်​​တော့ ကျ​နော့်​ဘယ်​ဖက်​လက်​ဖျံကိုဆတ်​ခနဲပုတ်​လိုက်​ပါတယ်​။ […]